Badeeco tijaabo ah oo loo yaqaan "acetate": fadlan ha isticmaalin haddii aadan ogeyn kuwaan
/blog/Trenbolone copolymer/Badeeco tijaabo ah oo la yidhaahdo acetate: fadlan ha u isticmaalin haddii aadan ogeyn waxyaabahaas!
Posted on 12 / 09 / 2017 by 阿斯劳 ku qoray Trenbolone copolymer.
fadlan ha isticmaalin haddii aadan ogeyn waxyaalahan!
Maqaalkan waxaa loogu talagalay dadka qaadaya tijaabada testosterone acetate, ka hor intaadan isticmaalin, waa inaadan dhaafin wax macluumaad ah qodobkan soo socda.
Baaritaan Astonta Astetate
1.Testosterone Astetate guud ahaan 2.Waa maxay tijaabada baaritaanka Astetate Acetate?
3.Waa maxay cirbadaha loo yaqaan 'testosterone acetate'? 4.Waa maxay imtixaanka?
5.Waa maxay dhibaatooyinka soo raaca ee Testosterone Low? 6.How maxay baaritaanka testosterone Acetate ee loogu talagalay tijaabada hoose ee testosterone?
7.Waa maxay Qiyaasta Testosterone Acetate? / Intee in le'eg ee Testosterone Acetate waa inaan isku duraa? 8.T testosterone acetate cycle & u isticmaal Dhismaha jirka
9.Waa maxay saameynta liddiga ah ee candhuufta Astetat? 10.Ka jirtaa si aad u iibsato nadiifin sareysa
11.Testosterone Soo koobid Astetate
Baaritaan Astonta waa mid ka mid ah noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'Testosterone' oo la heli karo, (sida Cootionate testosterone–Waxaan ka hadalnay maqaalkii hore) sida caadiga ah bodybuilding iyo daweynta ED, noocyada kale ee testosterone waa baaritaanka tijaabada ah, Imtixaanka maqaarka, Phenylpropionate testosterone, isosaproate testosterone, proposterate Testosterone,Imtixaanka Sustanon 250, dhammaantood waa qayb ka mid ah kala duwanaanshaha Testosterone.
Testosterone Acetate waxay leedahay xaddiga ugu dheereeya ee jidhka markaa ka dibna qiimeeye kale. Heerarka ugu sarreysa saacadaha 12 sidaas darteed waxay u baahan tahay inaad maalin walba isku durto si aad u sii wadato heerarka testosterone si joogto ah. Mg per Mg waxaad heli doontaa tijaabo dheeraad ah oo la heli karo oo leh Acetate kadibna waxaad yeelan doontaa imtixaannada dheeraadka ah ee ku salaysan ester. 100mg of Testosterone Acetate waxay dareemi doontaa mid ka xoog badan 100mg of Tijaabin tijaabo ah.
Sida caadiga ah, si dhakhso ah / gaaban oo loo yaqaan 'ester', ayaa sigaarka sareeya (PIP) (xanuunka lagu mudo) marka ay timaado Testosterone (Tijaabo). Isku duritaanka tijaabin dheer oo dheellitiran sida Enanthate laba jeer toddobaadkii ayaa siin doona heerarka dhiigga ee joogtada ah ee baaritaanka.
Sawir-qaadista tijaabada ah ee kaneecada cadayga ah
Name: Qalitaan tijaabo ah
Qaaciddada Molecular: C22H30O4
Miisaanka kelli: 358.4712
Waa maxay budada cayriin ee loo yaqaan 'Testosterone Acetate'?
Testosterone Acetate budad cayriin ah, walxo cayriin ee Testosterone Acetate, waa nooc ka mid ah budada White Crystalline, oo badanaa loo isticmaalo tijaabinta tijaabada Testosterone Acetate,
faahfaahin ah ee tijaabada Testosterone Acetate sida hoos ku xusan:
Magaca: Testosterone Acetate
Muuqaal: Budada Caddaan Cad
Kala-miiridda: Kala-baxa biyaha ama aalkolada, ku milma Acetic acid, ethyl ester
Qiyaasta: 250-1000mg / usbuuc
Waa maxay cirbadaha loo yaqaan 'testosterone acetate'?
Cirbadaha testosterone acetate waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee daaweynta heerarka testosterone ee hooseeya ama hypogonadism ee ragga qaangaarka ah. kor u qaadista muruqyada.
Noocyo badan oo ka mid ah testosterone ayaa laga heli karaa suuqa maanta. Qaar way ka xoog badan yihiin kuwa kale, sida testosterone acetate.
Aqoonta iyaga, sida ay u dhaqmaan jirka, iyo isticmaalka digniinta waa muhiim.
Waa maxay imtixaanka tijaabada?
testosterone wuxuu mas'uul ka yahay dhowr shaqo oo ku jira jirka.
Waa hormoon asaas ah oo hormood ah oo mas'uul ka ah hormarinta iyo kobcinta sifooyinka labka ama ragga.
Waxaa laga soo saaraa unugyada leydig ee xiniinyaha iyo qawaaniinta loo yaqaan 'gonadotropin secretions', waxay kicisaa muruqyada qalfoofka, waxayna masuul ka tahay koboca shahwada.
Waxa kale oo ay leedahay tiro ka mid ah cuntooyinka anabolic protein, inta badana lagu qeexay awooda ay u leedahay in lagu hayo kalsiyum, potassium, nitrogen, iyo fosfooraska, dhammaan dhinacyada muhiimka ah ee maskaxda iyo nudaha unugyada lafaha ragga.
Waxsoosaarkaan waxaa la socdaa oo uu xakameeyaa qanjirka pituitary ee maskaxda.
Waa maxay saameynta soo raaca ee Testosterone Low?
Ragga ayaa si dabiici ah u bilaaba inay lumiyaan qaar ka mid ah testosterone markii ay ku dhacaan 30 ama 40s. Hoos u dhac deg deg ah oo ku yimaada heerarka testosterone ayaa laga yaabaa inay muujiso dhibaato la yiraahdo testosterone low (T hooseeya). Hormoonkaas hooseeya wuxuu sababi karaa:
erectile cillad (ED)
isbeddel ku yimaada wadida galmada
Tirada shahwada oo hoos u dhacda
Ragga qaarkood ayaa sidoo kale laga yaabaa inay isbeddel ku sameeyaan cabbirka guska iyo xiniinyaha. Kuwa kale waxay yeelan karaan barar naas.
Waxa intaa dheer, waxay sababi kartaa Baruurta iyo muruqyada oo isbadala.
Ragga sida caadiga ah waxay leeyihiin dufanka jidhka oo ka yar haweenka. Tani waxay qayb ahaan la xiriirtaa testosterone, taas oo xakameysa qaybinta dufanka iyo dayactirka murqaha jirkaada. Iyada oo T hooseeya, waxaad u badan tahay inaad aragto kororka dufanka jirka, gaar ahaan agagaarka bartamaha.
Hoormoonkaaga ayaa sidoo kale kaa caawin kara habka koritaanka murqaha. Sidaa darteed, leh T hooseeya, waxaad dareemeysaa inaad lumiso murqo ama xoog. Hase yeeshee, tani waxay dhacdaa oo kaliya haddii T-daagu hooseeyo uu sii dheeraado oo aad u daran.
Tijaabooyinka tijaabada ayaa kaa caawin kara nidaaminta qaybinta dufanka, laakiin ma aha inaad ka filaato miisaan aad u weyn oo ka timaadda daaweynta hoormoonka kali. Sida dayactirka murqaha, daaweynta testosterone ayaa lagu ogaadey in ay gacan ka geysato kor u qaadista murqaha, laakiin maaha xoog.
Sidee buu testosterone acetate u shaqeeyaa tijaabada yar ee testosterone?
Testosterone Acetate waa maaddada lipid steroid ah. Testosterone acetate waxay u shaqeysaa adoo beddelaya testosterone in jirka ka maqan yahay. Testosterone acetate waa in la isticmaalaa oo kaliya haddii la'aanta testosterone ay xaqiijisay calaamadaha iyo baaritaanka dhiigga. Astosterone waa hormoon lab ah, oo lagu sifeeyay wakiilka meteroole iyo hormoonada, iyo masuul ka ah horumarinta sifooyinka galmada ee ragga oo ay ku jiraan horumarinta iyo dayactirka xubnaha taranka, koritaanka timaha wajiga, horumarka murqaha, iyo sifooyin kale. Qoritaanka rijeetada, waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo arimaha haweenka, oo ay ku jiraan heerarka testosterone ee hooseeya (hypogonadism). Testosterone acetate waa hal nooc oo loo yaqaan 'ester'. Noocyo badan oo testosterone ah ayaa laga heli karaa suuqa maanta. Qaar way ka xoog badan yihiin kuwa kale, sida testosterone acetate. Cudurka testosterone acetate waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee daaweynta ee heerarka testosterone ama hypogonadism ee ragga ragga ah. Cudurrada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa jidh-dhiseyaasha si kor loogu qaado muruqyada.
Maxay tahay Qiyaasta Testosterone Acetate? / Intee in le'eg ee Testosterone Acetate waa inaan isku duraa?
Testosterone Acetate waa Androgen, oo badanaa loo isticmaalo dhiska jidhka, jidh ahaanna lagu ilaaliyo iyo kor u qaadida horumarinta maskaxda iyo xubnaha galmada.
Haddii aad ku jirto gambale iyo nus imtixaanka sida jirdhis tartiib tartiib ah, waxaad marwalba ku jirtaa heerarka dhiiga ee aadka u sareysa. Laakiin dabcan, taasi ma ahan mid caafimaad leh. Wixii khibrad caafimaad leh, heerar hoose ayaa la doortaa. Wareeg yar oo amaan ah waxay yeelan doontaa maadooyinka 4-500 ee toddobaadkii. Qiyaasta HRT ee baaritaanka waxay ku hoos qoran tahay toddobaadkii. Maskaxda ku hay, waxaad ku jirtaa HRT sanadka oo dhan, waana taas sababta aad shoul u joogtid ama ka hooseyso 250. Xiddiga Imtixaanka wuxuu ku siinayaa waqti gaaban markaad u baahatid.
Wareegga tijaabada 'acetate testosterone' & u isticmaal Dhismaha jirka
testosterone acetate dosage. Waa wax qarsoodi ah in cirbado aad u caan ah oo ka mid ah jir-dhiseyaasha, oo leh ama aan laheyn daawooyin.
Qiyaasta wareegga ee testosterone Acetate bodybuilding, way ku kala duwan tahay dadka ilaa dadka, waxay sababaan jirka Adkaysiga jirku wuu ka duwan yahay qof walba. Halkan waa wareegga lagu talinayo ee loogu talagalay dhismaha jirka, dhab ahaantii sidoo kale waxaad si fudud uga heli kartaa golaha, bedel qiyaasta sida aad tahay. kaliya aqbalid)
Imtixaanka Acetate 100mg EOD (300mg / usbuuc)
Sidoo kale waa in la ogaadaa in inkastoo cirbadaha steroid ay caan ku yihiin kuwa jir-dhiseyaasha ee muruqyada guulaha iyo xoojinta ujeedooyinka, natiijooyinka noocan oo kale ah waxay u muuqdaan kuwo si tartiib ah u lumaya marka daroogada la joojiyo. Xalalka qaarkood ayaa gaaban marka loo eego kala bar nolosha dadka kale.
Testosterone acetate kala badh noloshu waxay soo saari kartaa korodh deg-deg ah heerarka soo riixa, laakiin waxyaabahani waxay xirxiraan hal maalin ilaa laba maalmood.
Waa Maxay Saameyn Waxyeellada Sidee Looga Heli Karaa Testosterone Acetate Cough?
Siyaabaha loo yaqaan testosterone acetate waxay leedahay sumadda midka ugu xooggan ee xoogga ah ee wareegyada steroidka ah. Wareegga tijaabada ee "acetate" ayaa laga yaabaa inuu soo saaro tiro ka mid ah saameynaha aan la filaynin sida xajinta xiniinyaha, timo luminta, luminta, madax xanuunka, walwalka, iyo qaar , niyadjabka niyadda. Waa hormoon awood leh oo saameyn ku yeelan kara caafimaadka jidhka, maskaxda, iyo dareenka iyo caafimaadka. Sidaa oo kale, waa in la ixtiraamo oo loo adeegsadaa si taxadar leh. Testosterone acetate waxaa markii ugu horreysay lagu sharxay tobaneeyo sano ka hor, marka asxaab la isku duro oo horay loo sameeyay. Isticmaalkan steroidka ah ayaa si dhakhso ah uga fogaaday farsamooyinka bukaan-socodka si dhakhso ah, iyo laga yaabe sabab wanaagsan. Waxaa lagu beddelay wakiilada ay ahaayeen kuwo raaxo leh, ka shaqeynaya gaabis, waxay lahaayeen sifududar saliideed oo sarreeya, waxay ahaayeen kuwo aad u xoogan waxayna bixiyeen karti dheeraad ah. Marka la eego, tijaabo-qaadista tijaabada ah ee "testosterone acetate" waxay "shaqeyneysaa" sida daawooyinka kale ee testosterone sababtoo ah waxay bixisaa testosterone. Hase yeeshe, dhammaantood, maahan wax la rabo haddii aadan rabin daaweyn degdeg ah oo macquul ah oo sababi karta daroogo.
Maxay tahay macluumaadka kale ee muhimka ah ee aan ka ogaanayo tijaabooyinka tijaabada ah ee testosterone acetate?
Testosterone acetate waxay leedahay sumcadda mid ka mid ah noocyada ugu xooggan oo awoodda ah ee cirbadaha steroid ah.
Testosterone Acetate wuxuu caqabad ku yahay kuwa sameeya. Guud ahaan, Ester-ka oo gaabis ah ayay u badan tahay inuu jiri doono PIP. Acetate-keena waa mid loo dulqaadan karo / aan xanuun lahayn. Faa'iido kale ayaa ah heerka nadiifinta ee Ester-kan oo ku habboon cayaaraha la tijaabiyay. Xusuusin muhiim ah in la qaato ayaa ah in Testosterone Acetate ay sidoo kale ka xawaareyn badan tahay Esters-ka kale sidaa darteed waa inaad taxaddar yeelataa haddii aad isku dayeyso inaad maamusho dhibaatooyinka soo raaca estrogen. 100mg of Acetate aad ayuu uga xoog badan yahay markaa Enanthate markaa ku dar SERM ama anti-aromatase iyadoo lala socdo Ace Test.
Wax qarsoodi ah maaha in cilladuhu ay aad u jecel yihiin kuwa jidhka sameeya, iyada oo aan la qorin ama aan la qorin. Sidoo kale waa in la ogaadaa in inkastoo cirbadaha steroid ay caan ku yihiin kuwa jir-dhiseyaasha ee muruqyada guulaha iyo xoojinta ujeedooyinka, natiijooyinka noocan oo kale ah waxay u muuqdaan kuwo si tartiib ah u lumaya marka daroogada la joojiyo. Xalalka qaarkood waxay gaaban yihiin marka la eego kala badh nolosha dadka kale. Dhiig-bixiyaha tijaabada ah wuxuu ku soo saari karaa nus-celin heer-deg ah oo la soo riixo, laakiin waxyaabahani waxay xirxiraan hal maalin ilaa laba maalmood.
Sidoo kale waa in la ogaadaa in inkastoo duritaanada steroid ay ka faa'iideystaan ​​murqaha dareenka iyo xoojinta ujeedooyinka jir-dhiseyaasha, natiijooyinka waxay u muuqdaan kuwo baaba'aya marka daroogada la joojiyo. Xalalka qaarkood waxay gaaban yihiin marka loo eego hab nololeedka hababka kale. Nolosha nuska ah ee testosterone acetate ayaa si dhakhso ah u kordhi karta, laakiin dhibaatooyinkani way baaba'ayaan ka dib maalmo 1-2. Habka ugu fiican ee aad u baahan tahay.
Sidee loo dhamaystiraa Testosterone Acetate oo ka yimid Testosterone Acetate Cough?
Waa kuwan soo-saarka fudud:
3g baaritaanka a / p / pp budada
2g tuubo budada
Xaggee laga iibsadaa baaritaanka sare ee testosterone Acetate?
Testosterone Acetate budada cayriin waa mid aad u caan ah steroid dhiska, waana in si fudud looga helaa suuqa madow ee anabolic steroid iyada oo aan wax dadaal ah lahayn. Sidoo kale waa wax caadi ah oo si fudud loo soo saaray in lagu helo qiimo aad u macquul ah. Budada cayriin ee loo yaqaan 'Testosterone Acetate budada' waxay u jirtaa labadaba badeecada darajada daawada ee aadanaha, iyo sidoo kale sheybaarada sheybaarka (UGL) ee suuqa. Kala duwanaanshaha ayaa halkan ka muuqda, iyadoo xakamaynta tayada ay tahay arrinta ugu weyn, iyo heerka dawada ee testosterone Acetate budada cayriin badanaa way ka qaalisan tahay sababo cad.
Baadhitaanka Astetate-ka Cuntada ah waxaa laga iibsan karaa ilaha internetka iyo iibiyeyaasha, iyo waliba dhaqdhaqaaqa dhaqameed ee qof ahaaneed (ie 'gym-traders'). Siciradu way kala duwanaan karaan. Daawada Farmasiga ah ee Acetate Cough Acetate waxaa laga heli karaa USD400-USD1000 / kg. Markaad xulato budada. Amarrada amarada waxaa lagu amrayaa inay tijaabiyaan alaabta si aad u badbaadin karto wakhti iyo lacag badan.
Baaritaan Astonta Astetat
Testosterone Acetate waa steroid stemoid ah oo leh saameyn anabolic ah. Daaweynaha intiisa badani wuxuu si dhakhso ah u daaweynayaa daaweynta jirka. Testosterone Acetate waxay leedahay khatar aad u yar oo ku haynta biyaha. Shakhsiyaadka ka faa'iideysta foomkan testosterone waxay sidoo kale sheeganayaan in ay tahay arin uxun ah nooca ugu xanuunsan ee Testosterone.
Testosterone Acetate ester waa feejignaan aad u dhakhso badan, sidaas darteedna wuxuu u baahan yahay jadwal badan oo soo noqnoqon leh si loo ilaaliyo heerarka dhiigga sida ugu macquulsan. Faa'iidada arrintani waxay tahay, in steroid laga saaro jirka si dhakhso ah ka dib marka isticmaalka la joojiyo, sidaas awgeedna ka dhigaysa xulasho dheeraad ah oo loogu talagalay cayaaraha la baaray. Ciyaartoyda waxay isticmaalaan Testosterone Acetate si ay u arkaan faa'iido weyn ee muruqa iyo xoogga, iyo sidoo kale guud ahaan dareenka wanaagsan ee lagu kordhiyo libido iyo xawaaraha jinsiga.
Sidee loo iibsadaa Vardenafil hydrochloride caano boodh ah oo ka sameysan AASRAW? Primobolan waa steroidska ugu badan ee loo isticmaalo jaridda wareegyada steroidka